Ị nwere ike inyere m aka ịghọta ihe ndị dị na Keywords Amazon na Atụmatụ na aghụghọ?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị jiri ụfọdụ nkọwa na isi ihe dị mkpa banyere amaokwu Amazon, tinyere ndụmọdụ na ụfọdụ ndụmọdụ bara uru site na ọkachamara edepụta. Ya mere, gịnị na - eme nchọpụta nke isiokwu, karịsịa site na echiche nke azụmahịa ịntanetị na mbubata na echiche nke oge a nke azụmahịa ecommerce nke a na - eme n'ọtụtụ? Nchịkọta nhọrọ njirimara Amazon na nyocha ọchụchọ nke dị mkpa iji rụchaa ọrụ a na-emekarị ka ọ bụrụ usoro nyocha na nyocha nke a na-achọ ịchịkọta isiokwu ndị dị mkpa na okwu ogologo oge nke ndị na-azụ ahịa na-eme nchọpụta ngwaahịa (dịka ọmụmaatụ, aha aha, ika, aha, ma obu ihe ndi ozo).
Ma, ọ ga - ekwe omume maka okwu ọchụchọ niile na mkpụrụokwu banyere ngwaahịa ụfọdụ ịchọta n'otu ebe? O nwere ike ịbụ na i cheburu na ee e, ọ bụghị. Ọ pụtakwara na n'agbanyeghị na e nwere ọtụtụ ihe ndị dị na nchọpụta isiokwu dị na Web, ọ dịghị oke oge fọdụrụnụ iji mee ihe nyocha na nchịkọta ederede. Na ebe a bụ mgbe ụfọdụ ndụmọdụ dị irè banyere amaokwu Amazon na ndepụta ntuziaka na-abanye. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ntuziaka dị mkpirikpi iji mee ka ihe niile doo anya - creating a logo for a business.
Nhazi Ndepụta Ngwaahịa na Amazon na Keywords Atụmatụ
Nke a bụ ụfọdụ atụmatụ nyochaa nke kachasị mma maka amaokwu Amazon na ndụmọdụ iji nyere gị aka. Nyere na ị na-anọgidesi ike na ị ga-agafe usoro nyocha ọchụchọ mkpokọta (nke nwere nghọta dị egwu ma na-atụ anya ahịa ahịa), ị ga-ahụ ihe ị na-achọ. M na-ekwu na e nwere ọtụtụ okwu dị iche iche na mkparịta ụka ọchụchọ ndị dị mkpa - nanị na-echere ka a ga-eji gị maka nhazi ndepụta dị mma, ọganihu dị elu karịa ọkwa, na mgbanwe dị ukwuu. Ihe niile dị nnọọ mfe - na nso ngwaahịa gị kwekọrọ na ezigbo ụlọ ahịa na-atụ anya n'ebe ahụ, ọ ga-abụ na ndị ahịa ga-emesị ghọọ ndị na-azụ gị.
Nzọụkwụ Otu: Malite na Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
N'ezie, ọ dịghị ọrụ zuru oke iji nyere gị akaramaahịa Amazon ọ bụla ma ọ bụ ndụmọdụ ọ bụla iji mee ka ị nwee mmerụ ọ bụla ngwa ngwa..Ka o sina dị, ịmalite site na isi na ịchọpụta Google Planner nwere ike ịbụ ihe ngwọta kachasị mma iji hụ nchịkọta ọchụchọ ugbu a ma kwadebe ndepụta nchịkọta nke isiokwu ndị kachasị elu na ọchụchọ ndị mmadụ ji eme ihe na Google iji chọta ihe ha chọrọ n'aka niile n'elu ụwa. Ime otú ahụ, nzọụkwụ gị ọzọ bụ ịdọkọta ihe niile ma bọọ naanị mkpụrụokwu ndị ahụ ga-enyere gị aka ederede.
Nzọụkwụ nke abụọ: Chọpụta maka Real Shopping Search Trends
N'ime ihe ndị ọzọ ecommerce ecommerce nchọpụta na nsuso ngwaọrụ dị ugbu a, m nwere ike ikwu na-ewere otu n'ime na ndị na-enyere ndị enyemaka n'Ịntanet aka ịchọpụta ezigbo ọchụchọ - ma na Amazon, na ndị ahịa ndị ọzọ juputara na-azụkarị ụdị ngwaahịa ngwaahịa na ntaneti kachasị mma (dịka eBay, ndị ọzọ n'elu ụlọ ahịa ịzụ ahịa, dịka eBay, Alibaba, Walmart, wdg). Ya mere, oge eruchara ịmalite ịchọgharị ihe ntanetị gị na ngwaahịa maka ngwaahịa Amazon ma nweta ndụmọdụ na aro bara uru nke ahaziri maka gị. Enwere onwe gị ịnwale otu n'ime ihe ndị a na-eme nnu na nchịkọta nke ọma: KeywordInspector, Scope, Merchant Words, nakwa Onye Ọkà Mmụta Sayensị. A na-eji ha nile eme ihe - gosipụtara usoro ntanetị ma ọ bụ ngwaọrụ ngwanrọ iji nye gị foto zuru ezu nke amaokwu Amazon, ndụmọdụ ndị bara uru, na ezi oge bara uru - wepụtara site na ahịa shopper chọọ, ma ọ bụ jide n'aka ndị ahịa na-ere ahịa na gị ụdị.